www.camaloow.com - News: Wasiirka Arrimaha Dibadda Germany oo Oo Muqdisho soo gaaray.............................
December 10 2018 12:28:22
Wasiirka Arrimaha Dibadda Germany oo Oo Muqdisho soo gaaray.............................
<?php </a> Wasiirka arrimaha dibadda Jarmalka Sigmar Gabriel ayaa soo gaaray magaalada Muqdisho ee Caasimadda Soomaaliya, iyadoo uu ku soo dhoweeyay garoonka diyaaradaha wasiirka arrimaha Dibadda Soomaaliya Yuusuf Garaad Omar.
Booqashada wasiirka arrimaha dibadda Jarmalka oo aheyd mid aan horay loo sii shaacin ayaa waxaa la filayaa inuu la kulmo Madaxda dowladda Wasiirka ayaa sidoo kale ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre kulan la qaatay oo ay uga wada hadleen xoojinta xiriirka labada dal ka dhexeeyo.
Ugu horreyn Wasiirka Arrimaha Dibadda Germany ayaa u jeedka Safarkooda ku sheegay in uu ku qotamo sidii ay taageero ballaaran ugu fidin lahaayeen Dowladda Soomaaliya , waxaana uu shaaca ka qaaday in dowladdiisa ay 70 Million dollar ugu deeqeyso Soomaaliya isagoona bogaadiyay hanaanka Dowladdu uga qeyb qaadaneyso wax ka qabashada Abaaraha.
Dhinaciisa Ra’iisul Wasaaraha oo ka warbixiyay kulan uu la qaatay Wasiirka Arrimaha Dibadda Germany sheegay in ay dowladdiisu ka fileyso Germany in si ka wanaagsan sidi horay ay u taageeri jirtay Soomaaliya haatan ay u taageerto maadaama Isbedel uu dalka Soomaaliya ka hana qaaday.
Dhinaca kale wararka qaar ayaa sheegaya in Sigmar Gabriel uu kulan la qaadan doono madaxwaynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo.
Dowladda Jarmalka ayaa ka mid ah dowladaha midowga yurub ee ugu awooda badan, kuwaasoo taageera howl galka nabad ilaalinta AMISOM, oo dhaqaale fara badna ku bixiyaan, imaatanka wasiirka ayaa sii xoojin doono xiriirka labada dal ka dhexeeyo, iyo Taageerada jarmalka uu siiyo Soomaaliya.
· salaad on May 02 2017 · 0 Comments · 72037 Reads ·
Render time: 0.01 seconds 28,908,643 unique visits